आर्थिक उपार्जनका वैकल्पिक बाटो खोजिरहेकाहरुको प्रवेशले शेयर बजार उचाइमा पुगेको हो - निष्पक्षखबर
आर्थिक उपार्जनका वैकल्पिक बाटो खोजिरहेकाहरुको प्रवेशले शेयर बजार उचाइमा पुगेको हो
शेयर बजारको कारोबार भनेको लगानीकर्ताहरुको मनोभावमा भर पर्ने हुन्छ । उनीहरुको मानसिकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा शेयर बजार अघि बढ्छ, बजारमा शेयरको माग र आपूर्ति कसरी भइरहेको छ, त्यसले पनि फरक पर्छ । अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने धेरै कारोबारी साथीहरु बजारमा सक्रिय हुनुभएको छ । जसले ऋण लिएर शेयर कारोबार गर्नुहुन्छ अथवा पैसा सजिलै र सहजै पाइएको छ, अहिले यसले पनि ‘प्लस प्वाइन्ट’ गरेको छ ।
अहिले अरु क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरु एकदमै संकुचित भएको छ । अहिलेको अवस्थामा केही काम गरेर ल यसरी लगानी गरौँ भन्दा पनि त्यो अवसर हामीसँग कम छ । अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा शेयर बजारतिर केन्द्रित भएकाले पनि यतातिरको कारोबार उच्च बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड कायम गरेको जस्तो लाग्छ । अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै बसेर पनि अनलाइनमार्फत शेयर किनबेच गर्न सकिने अवस्था छ ।
यो सँगसँगै बजार घट्ने क्रम र बढ्ने क्रम चाहिँ चक्र हुन्छ । त्यसलाई ‘बुल’ र ‘बियरिस’ को चक्र भनेर भनिन्छ । त्यो वियरिस चक्र चाहिँ ४ वर्ष पार गरेको अवस्था हो अहिले । वियरिस चक्र पूरा भयो भन्ने मानिसहरुको सोचले पनि बजारमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।
अब बजार धेरै घट्दैन अथवा बजार अब बढ्छ भन्ने सकारात्मक मानसिकता र आत्मविश्वासले पनि शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हुन सक्छ । अहिलेको आत्मविश्वासले बजारलाई अझ माथि जान सहयोग पुग्न सक्छ ।
शेयर बजारमा कोरोनाको प्रभाव कति ?
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अरु क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरु त कम भए । त्यसैको प्रभावले कारोबार गर्ने अथवा आर्थिक गतिविधिमा संलग्न मानिसहरुले आर्थिक उपार्जन गर्ने वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका छन् ।
वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्दै जाँदा उनीहरुले शेयर बजारमा सम्भावना देखे । हातमा भएको पैसालाई कहाँ लगेर लगानी गरौँ भन्ने भइरहेको समयमा उनीहरु शेयर बजारमा आएको देखिन्छ । कोरोनाले सबै आर्थिक क्षेत्रमा असर परिरहेको समयमा अलिकति भएको रकमलाई शेयर बजारमा लगानी गरौँ न त भनेर पनि उनीहरु शेयर बजारमा आकर्षित भएको पाइन्छ ।
शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव
अरु क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि कम हुनेबित्तिकै अल्पकालीन रुपमा प्रवेश गर्ने साथीहरु अलि धेरै हुनुहुन्छ । जसले शेयर बजारलाई परीक्षण गर्दै अवसरहरु लिनु भएको छ । सँगसँगै वियरिस चक्रहरु पनि पूरा भइसकेको अवस्था छ । प्रविधिले सहजता ल्याएको छ ।
शेयरमा लगानी गर्नका लागि पहिले ऋण पाइँदैन थियो, अहिले शेयर ऋण पनि सहजै सस्तो पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राम्रोसँग लगानी गर्न सक्नेहरुलाई बोलाएर ऋण दिइरहेका छन् । पहिलेजस्तो ब्रोकर कहाँ गएर लामो समयसम्म बसेर भुक्तानी लिनदिन अथवा शेयर कारोबार गर्न गाह्रो छैन ।
घरमै अथवा कतै बसेर सहजै रुपमा किनबेच गर्न सकिन्छ । यिनै कुराहरुले शेयर बजारमा प्रभाव पारिरहेको छ । प्राथमिक बजारमा आईपीओ निस्कासनमा पनि पहिलेजस्तो एकदुई महिना लाग्दैन । अहिले २÷४ दिनमै शेयर बाँडफाँड हुने गरेको छ । यस्ता सुधारहरु जुन भइरहेको छ, बजारमा यसले पनि मानिसहरु शेयर कारोबारप्रति आकर्षित गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।
गएको फागुनमा एकैचोटी माथि गएको बजार घट्दै फेरि बढ्न थालेको छ । पैसाको सहज उपलब्धता र प्रविधिमैत्री हुँदै गर्दा यो बजार अझै अघि बढिरहने मात्रै हो कि अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा सबैमा छ । वास्तविक रुपमा यसको कारोबार कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे आजको मूल्यांकनले पुग्दैन ।
अबको जुन दिन कारोबार हुन्छ, त्यो समयमा किनबेच गर्ने साथीहरुको मानसिकताले अर्थात् त्यही कारोबार गरिरहेको समयमा पनि कुनै सानो खबरले बजारमा प्रभाव पार्न सक्छ । आपूर्ति र मूल्य तलमाथि हुन सक्छ । मूल्य तलमाथि हुनेबित्तिकै बजार र परिसूचक तलमाथि हुन सक्छ । बजारमा जो छिर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई पनि यहीँ राखिराख्ने र बजारलाई अझै राम्रो होस् र धेरै नघटोस् भन्नका लागि अहिलेकै जस्तो पैसा सहजै रुपमा उपलब्ध हुनुपर्यो ।
बजारमा कारोबार गर्दा लाग्ने लागत जस्तै दलालको कमिसन, नेप्सेको कमिसनहरुमा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । शेयरहरु जति समयमा आउनुपर्ने हो, त्यो समयमा आउनुपर्यो । मान्छेलाई यहाँबाट सजिलै आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छु, केही लगानी गर्यो भने सजिलै उपार्जन गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेण्टी भयो भने रेकर्ड कायमै राख्न सकिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिन्छ ।
अबका दिनमा शेयर बजारको कारोबार कस्तो रहन्छ ?
आर्थिक परिसूचक अथवा हाम्रा आर्थिक तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति सकारात्मक अर्थात् राम्रो देखिँदैन । त्यति हुँदै गर्दा पनि अरु क्षेत्रमा विकल्प राम्रो हुनेबित्तिकै अल्पकालीन रुपमा बजार प्रवेश गर्नुभएका साथीहरु पक्कै पनि निक्लनुहुनेछ । त्यसबेला बजारमा दबाब आउन सक्छ ।
हाम्रा सूचीकृत कम्पनीहरुका आर्थिक वित्तीय विवरणहरु जस्तै लाभांश क्षमता, मुनाफाहरु राम्रो हुँदै गयो भने बजारले पक्कै पनि सकारात्मक रुप लिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरुका वित्तीय सूचकहरु जस्तै लाभांश र मुनाफाहरु कम आउने भयो भने त लगानीकर्ताहरु पछि हट्न सक्छन् ।
प्राविधिक विश्लेषणले बजार यतिसम्म पुग्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न त सक्ला, तर साँच्चिकै बजार घट्छ अथवा बढ्छ भनेर ठोकुवा गरेर भन्ने सकिने अवस्था भने रहँदैन । – उज्यालो अनलाइन
४२६ संक्रमित थपिए, ७४८ जना निको
भारतीय लरीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु